Home » Vaovao momba ny fizahantany » Gloria Guevara dia miady ho an'ny fitarihana amin'ny fanokafana ny fomba WTTC Travel
Gloria Guevara, filoha & CEO an'ny WTTC
Nandritra ny fivoriana fanakianana, Gloria Guevara, filoha & CEO an'ny WTTC dia nilaza hoe: "Iray ihany ny fangatahana ataontsika: mila jerena ny famerenana amin'ny laoniny ny fivezivezena iraisam-pirenena. Mila fitsipika mazava momba ny fivezivezena isika. Eoropeana dia tsy maintsy mamaritra famaritana, ka mazava ny fomba ahafahan'ny fivezivezena azo haverina soa aman-tsara ao anatin'ny EU, mankany amin'ny EU ary avy any EU. ”
174 tapitrisa ny asa very tamin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany
. Firy ny asa azo averina, ahoana ary oviana
Ny vaksinina sy ny fitarihana any amin'ny firenena hanokatra ny sisin-tany dia iray amin'ireo fanalahidy atosiky ny WTTC.
Tokony hosolointsika ireo quarantine tsy mandaitra ary hifindra amin'ny fanombanana avy any amin'ny firenena ka ho amin'ny fanombanana miankina amin'ny tsirairay. Tsy ny vahoaka manontolo no voan'ny aretina, ary tsy tokony hitondrantsika azy ireo toy izany isika.
Ity no antso nataon'ny Gloria Guevara, lehiben'ny Filankevitry ny fizahantany sy fizahan-tany manerantany tamin'ny fivorian'ny minisitry ny fizahantany eropeana tamin'ity volana ity. Maniry ny fitarihana avy amin'ny Vondrona Eoropeana izy mba hamonjy ny sehatry ny Travel & fizahan-tany izay navela ho simba noho ny valanaretina COVID-19.
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny ITB Now Daily dia nilaza ny Tale Jeneralin'ny WTTC:
Tena be fanantenana izahay. Raha nametraka ahy io fanontaniana io ianao volana vitsivitsy lasa izay, dia mety ho hafa ny valiny. Ny antony dia tamin'ny taon-dasa dia mbola tsy nisy toy izany. Tombananay ho 174 tapitrisa ny asa voakitika manerantany. Rehefa nolazaiko fa nisy fiatraikany, dia fitambaran'ny olona navela na voaroaka na natao miverimberina. Niezaka nanombatombana asa firy izahay afaka miverina amin'ity taona ity, ary izany dia eo anelanelan'ny 88 sy 111 tapitrisa, izay salan'isa 100, saingy nilaza izahay fa misy ny fepetra tokony hipetraka.
Rehefa hitantsika ny fanolorana vaksinim-pahavoazana amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao dia mino izahay fa ampahany lehibe amin'ny vahaolana izany, saingy tsy io ihany no vahaolana.
Manohiza mamaky amin'ny pejy 2 (kitiho etsy ambany)
Ny fisokafan'ny fizahan-tany any Gresy izay nankafizin'ny WTTC dia notandreman'i WTN